Fampiharana China ny fanamboarana sy ny famokarana vy tsy misy vy | Daren
Ny fatorana tariby vy (dibbling) dia azo ampiasaina ao an-trano sy any ivelany. Raha ny toerana nampiasana azy dia azo fehezina mora foana izy io ary azo apetraka mora foana amin'ny tanana. Anti-antitra, anti-harafesina, taratra ultraviolet, tery. Famaritana feno.
Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny fifandraisan-davitra, herinaratra herinaratra, solika, simika, sambo, tetezana, tobin-herinaratra, fitaovana elektrika, fitaovana mekanika, famokarana taratasy, fiarovana afo ary fatorana sy fanamboarana fantsona hafa, na toerana hafa mila fehezina sy raikitra.
Ny fametahana vy tsy misy fangarony / fantsom-pifandraisana vy tsy misy fangarony / fantsom-by tsy miova dia mizara ho fanjakana mafy sy malefaka. Mamokatra andiany 201 sy 304 indrindra, izay efa nandalo ny fenitra GBT.
1. Tsy mora harafesina, tanjaka avo lenta, fanoherana ny harafoana matanjaka;
2. Loko madio, ataovy tsara tarehy ilay fonosana;
3. Manohitra ny fahanterana, maharitra ny fotoana fampiasana;
4. Izy io dia afaka mitazona fahombiazana tsara amin'ny fepetra henjana.
Izy io dia mety indrindra amin'ny fonosana injeniera isan-karazany, tsato-kazo, ranomasina, tobin-jiro, dock, tetezana, fitaovana, sns.
Ahoana ny fampiasana rojom-by vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika:
1. Esory ny faran'ny kasety 2-3CM eo akaikin'ny faran'ny buckle;
2. Ampandalovina manodidina ilay zavatra tokony hamehezana ny kasety ary ampitao ny fehikibo;
3. Ampandalovina mitsivalana amin'ny alàlan'ny antsy eo amin'ny masinina manenjana fehikibo sy ilay ampahany manindry ilay kasety, ary manenjana ny vava fehikibo miaraka amin'izay;
4. Tazomy ny buckle ary ahodino ny tahony mba hanamafisana ny fifamatorana;
5. Aorian'ny fanamafisana dia aondriho ny kasety sy ny masinina fanamafisana ny kasety mihoatra ny 90 degre hisorohana ny fantson'ilay kasety tsy hihemotra.
Fomba fitehirizana ny vy vy:
1. Rehefa mitahiry ny fantsom-by vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika dia tokony hanao fonon-tànana matihanina ilay mpitatitra mba hahazoana antoka fa madio ny faritra. Mandritra izany fotoana izany, mba hialana amin'ny gorodona ambonin'ny tany, dia tsara kokoa ny mampiasa fatorana tariby vy tsy manam-paharoa hiarovana ny fitaovana.
2. Rehefa mitahiry dia mila mitandrina ny tontolo iainana ihany koa ianao, toy ny fanesorana ny hamandoana, vovoka, solika, menaka manosotra ary lafin-javatra hafa arak'izay azo atao, raha tsy izany dia hiteraka harafesina eny ambonin'ny tany, na fanoherana ny harafesina tsy mandeha amin'ny laoniny.
3. Rehefa alentika eo anelanelan'ny sarimihetsika ny hamandoana sy ny substrate vita amin'ny vy tsy vita amin'ny plastika, dia ho haingana kokoa ny tahan'ny harafesina raha tsy misy horonantsary. Tehirizo amin'ny toerana madio sy maina ary misy rivotra. Tazomy ny fepetra fonosana tany am-boalohany. Halaviro ny hazavana mivantana amin'ny kasety vy tsy misy fangarony. Tokony hojerena tsindraindray ilay sarimihetsika. Raha miharatsy ny sarimihetsika (fiainana sarimihetsika: 6 volana) dia tokony hosoloana avy hatrany, raha alona ny fitaovana fonosana rehefa ampiana pad, dia esorina eo no ho eo ilay pad mba hisorohana ny harafesin'ny tany.